Muxuu ku jawaabey Xasan Shire oo la waydiiyey,”Waxaad shaqadii ku haystaa wasiir Gallan”.
May 3, 2021 Xuseen 9
Puntlandtimes (GALKACYO)-Wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal ayaa wax laga way diiyey su’aalaha suuqa hareeyey ee la xiriira shaqadiisa wasiirnimo iyo arrimaha ciidanka ee uu hormuudka u yahay iyadoo uu joogo wasiirkii amniga Puntland.
Wasiir Xasan Shire Abgaal oo habeenimadii xalay ahayd lagu casumey barta doodaha ee Club House ayaa la weydiiyey “Shaqadi Wasiirka Amniga adiga ku haystee maxaa wasiirkii shaqada lahaa loogu deyn wayey miyaa lagu aamini waayey shaqada”.
“Shaqada aan wado waa shaqo gudiga diiwan galinta ciidamada ee mahaa shaqo Amni, wasaarada shaqadeeda Waa haysata, Wasiirka hadan lagu kalsoonin Wasaardda looma dhibin shaqo aan qof ka qateyna ma jirto ee waa wada shaqeyna oo gudoomiye ku-xigeenka guddiga weeye rag saxiibo ahna Waa nahay hade”. ayuu yiri Xasan Shire Abgaal.
Ka sokow in Wasiirka maaliyada Puntland uu yahay shaqsi saameyn ku leh arrimaha hada taagan, haddana waa mid kamid ah saaxiibada dhaw ee Madaxweyne Deni, waxaana la aaminsan yahay in uu door weyn ku leeyhaya arrimaha go’aan qaadashada tas ayaana keenta in marar badan isaga & Saaxiibadisa xagga siyaasada loogu yeero in ay leeyihiin go’aamada Deni.
Xasan Shire ayaa waxaa laga dhigay guddoomiyaha guddiga dibu-habaynta ciidanka Puntland, wuxuuna muddooyinkii ugu dambeeyey shaqadii wasaaradda uga badnaa dhismaha ciidanka, diiwaangelintooda iyo arrimo la xiriira.
Su’aalaha qaarkood waxay un muujinayaan cawaannimada Soomaalida badankeeda ka haysata macnaha dawladnimada dhabta ah, iyada oo gebigeedaba loo arko oo laguna sookoobay jagooyin “reer-hebelaysan”, bal mixnadda intaas la’eg.
Waxa ay socotaba, jagooyinkii ayaa xataa laqabiileeyay oo mid waliba laga aaminsanyahay inay iyaduba “reer hebel” tahay cid kalena ay kaxarrimantahay! Maanka gurracan iyo garashada jaan ee ay Saado Cali kusheegtay ayaa allaylehe Soomaalida kucaddaatay.
Waa dadka garan waayay inay dawladdu ka unkantahay huwaabo, hay’ado, iyo idaarado ay hawlahoodu sida qaalibka ah liilansanyihiin oo qaab isgoys ahna ushaqeeyaan. Waadifada shakhsiga jagada haya uma muuqato ee waxaa Soomaalida umuuqata jagada oo reer hebel ah. Kuwaasaa la leeyahay dawladnimo taam ah ha hanteen!
Waxa aan malqi jidhay, “ma duqsibaad tahay maxaad wax u fadh fadhaysaa.”
Haddaba, aniga oo sii adkaynaya hadalka AQOONYAHAN Awlal, su’aashaaba markii horeba jaanjaan ahayd. Waayo weli maanaan maqal Gallan, oo leh waxaa layga xoogay hawshaydii wasaaradnimo. Sidaa daraadeed, aniga iima muuqato sabab keeni kadha su’aashaas, oo aan ka ahayn malaayacniga Soomaalida ayaamahan ku batay.
Digashada waa halkeedee, inaad maanta magacayga toos uxustay ayaa mucjiso weyn ah!!!
Nin baa wuxuu arkay nin kale oo feedhaha (feeraha ama xabadka) aad looga gubay dabadeedna wuxuu weydiiyey: maxaa xabadka kaaga dhacay “may habadka koo daaray.” Kii xabadka ka gubnaa ayaa ugu jawaabay isagoo kor u qaylinaya: maxaaa kaa galay ma xoolaad nagu leedahay. Kii kalaa hadalka ku soo noqday oo yiri: “ki kasay doowaa lakoo gubey” waa ku gartayoo hadal baa lagaa gubay.
Cida wasiirkaad suaasha weydiisay hadal tiro uun baa u geysay.
Inkasta oo aanan jeclayn inaan soo xigto wax gumaysi sheegay, hadana marmar qaar waxaad dib u garowsataa wax qof hore sheegay. Hadaba nin talyaani ah oo xilligii gumaysiga Soomaaliya xukumi jiray ayaa waxaa la weydiiyey sidee lagu gartaa qofka Soomaaliga ah wuxuuna ku jawaabay: waa nin dheer oo dhuuban oo madow oo hadal badan oo aan gar qaadan.
Arrinkaas waxaan xaqiiqsaday markii Soomaalidii nin kasta saxaafad furtay illaa magacyadii dhammaadaan oo la waayo magac loo baxsho kuwii gadaal kaga soo biiri lahaa.
QOFKA SU,AASHAA WEYDIIYAY WASIIRKA IYO QOFKA QORAALKA MEESHAAN KU SOO QORAY
WAA KOOXDA JECEL IN PUNTLAND BU BURTO
OO KU FEKERA FIDMO KA DHEX ABUUR WASIIR GALLAN IYO WASIIRKA MAALIYADDA.
LAAKIIN WAXA UU ILOOBAY IN FILIMKAAS UU WAA HORE QARXAY OO UUSAN U SHAQEYN.
SAAMILEYDA NACEYBKA PUNTLAND:
2.YAASIIN QOSLAAYE(QOSOL DHILO) SORRY
4.CBB CAYAYAANKA BARAHA BULSHADA
Suaashu wey fududahay.
Xasan Shire waa Maxamuud Saleebaan Gallan waa Cali Saleebaan waxba kama gooyaan Puntland.
Tusaale haddii Maxamuud Saleebaan qaateen madaxweyne Puntland sow Majeerteen kale ma ahayn in loo daayo wasiirka A ee Majeerteen kusoo aada ana reer Puntland kale?Cawad haddan ina Abdirizaq Abubakar meeshaas dadka waa waxaa addoonsada dad aan dhamayn 6%shacabka Puntland intaas ayaad afka leexinaysaan.Puntland iyadoon burburin waa in Maxamuud Saleebaan la iska qabtaa.
FG:Puntland in ay burburto lama aqbali karo,intay burburi lahayd IIMAAN laawayaasha ha iska joogaan.
Wasiir Xasan Shire waa wasiirka jaangooya miisaaniyadda iyo mushaarka ciidanka, sidaa awageed, wuxuu doonayaa in tirada dhabta ah ee ciidanka la helo, sidaana ay ku helaan mushaharkooda, meeshana laga saaro ciidamo badan oo bug ah oo taliyeyaal qaarkood mushaharkooda qaataan. Tirada ciidanka bugta ah iyo kuwo aan shaqeyn oo mushahar iska qaata waa musuq iyo aafo Soomaaliya ku baahsan.